पम्पमा पेट्रोल नभएको सूचना : गाडीका डिक्कीमा ड्रमका ड्रम तेल ! (फोटो र भिडियो):: Mero Desh
पम्पमा पेट्रोल नभएको सूचना : गाडीका डिक्कीमा ड्रमका ड्रम तेल ! (फोटो र भिडियो)
Published on: ४ चैत्र २०७६, मंगलवार १३:५४
काठमाडौं : मंगलबार बत्तीसपुतलीको कुमारी आयल स्टोरमा ‘पेट्रोल र डिजेल छैन’ भन्ने सूचना टाँसिएको थियो। एक युवक स्कुटर लिएर सरासर पम्पमा प्रवेश गरे। त्यहाँ बसेका कर्मचारीसँग छोटो कुरा गरेर निस्किए। उनी थिए उद्धव चौलागाईं। ‘म
भक्तपुरको ठिमीदेखि कोटेश्वर, नयाँ बानेश्वर र मैतीदेवी हुँदै बत्तीसपुतली आइपुग्दा १० वटा पम्पमा पुगेँ तर पेट्रोल कतै छैन’, उनले भने। कोरोना भाइरस संक्रमणको हल्लाले बजारमा खाद्यान्नदेखि हरेक उपभोग्य वस्तुको अभाव सुरु भएको छ। भारतबाट नियमित इन्धन आयात भए पनि पम्पमा भने पेट्रोल नभएको सूचना टाँस गरिएको छ। बत्तीसपुतली, मैतीदेवी पेट्रोलियम सप्लायर्स, श्री हरिसिद्धी आयल स्टोर, शान्तिनगर, भ्याली रिकेश सप्लायर्स, तीनकुने र तपस्या ट्रेडर्स, सिनामंगलसम्म पुग्दा सबै पम्पमा पेट्रोल तथा डिजेल नभएको सूचना टाँस गरिएको छ।
काठमाडौंको तीनकुनेस्थित भ्याली रिकेश सप्लायर्समा भने फरक दृश्य देखियो। पेट्रोल छैन भनेर सूचना टाँसिएकै पम्पबाट बा १२ च ७४० नम्बको सेतो कलरको फोर्ड गाडीले डिकीमा ड्रमका ड्रम तेल भरिरहेका थियो। अगाडि तेल नभएको सूचना टाँस गरेर डिक्कीका ड्रम भर्दै गरेको दृश्य खिच्न थालेपछि मास्क र रातो टिसर्ट लगाएका एक युवक खुब रिसाए। ‘यो गाडी मेरो हो, मलाई नसोधी भिडियो खिच्ने अधिकार तलाईं छैन’, रिसले झोक्किदै युवकले भने, ‘भिडियो डिलिट गर !’
बागमती पेट्रोल डिलर एशोसियनका उपाध्यक्ष तथा तपस्या ट्रेडर्स सिनामंगलका संचालक स्याम बुढाथोकी कोरोना संक्रमणको त्रासले इन्धनमा सामान्य समस्या देखिएको स्वीकार गर्छन्। ‘कोरनाको प्रभाव केही परेको देखिन्छ’, बुढाथोकी भन्छन्, ‘ग्यासको अभाव बजारमा भएकाले इन्धनको जोहो गर्न मानिस लाइन लागेको देखिन्छ।’ उनका अनुसार संक्रमणको त्रासकै कारण मानिसहरुले ३० प्रतिशतसम्म इन्धन स्टोर गरेको उनको भनाइ छ।
‘एक दुई लिटर हालेर चलाउनेले फुल हाल्न थाले। त्यसले इन्धन अभाव देखिएको हो’, उनले भने, ‘ढुक्क भए हुन्छ। मंगलबार साँझबाट इन्धन सहज हुन्छ।’अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा गिरावट आएसँगै सोमबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी नेपालमा इन्धनको मूल्य घटेको थियो।